को’रोनाबाट मृ’तक ला’शको आँ’खा लगायतका अंग नै गा’यब भएको देखिएपछि हं’गामा ! – AB Sansar
October 7, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on को’रोनाबाट मृ’तक ला’शको आँ’खा लगायतका अंग नै गा’यब भएको देखिएपछि हं’गामा !
काठमाडौ । को’रोना भा’इरस (को’भिड–१९) बाट सं’क्रमित मृ’तकको ला’शलाई निक्कै ध्यान दिइन्छ । भा’इरस फैलिन्छ भनेर निक्कै पटक प्लास्टिकले बेरिन्छ । तर भारतको इन्दौरको एक अस्पतालमा सबै चकित हुने खबर आयो । जहाँ कोरोना भाइरसबाट ८७ बर्षीय व्यक्तिको नि’धन भयो ।
ला’शलाई अस्पतालले निक्कै दर्बिलोसँग प्याक गरेको थियो । तर ला’श घरमा ला’शलाई मुसाले कोतरिदियो । त्यो देखिपछि मृ’तकका परिजार र आफन्छले हं’गामा मच्याए । अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकमाथी मृ’तकका परिवारीले ग’म्भीर आ’रोप लगाए । जानकारी अनुसार इन्दौरको यूनिक हस्पिटलमा यस्तो घ’टना भएको हो ।
त्यहाँको विनय नगर जन कोलोनीमा रहने एक बृद्धको चार दिन पहिलेदेखि उपचार भइरहेको थियो । उनी आइतबार बिहानसम्म ठिकठाक थिए । तर अस्पतालले अचानक सूचना दियो की उनको त मृ’त्यु भइसक्यो । परिवारलाई स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै अ’न्तिम संस्कारका लागि लाश बुझाउन अस्पताल बोलाइयो ।
तर ला’श प्याक गरिएको कभर सबै फाटेको देखियो । त्यसपछि शुरु भयो हं’गामा । परिवारले जब ला’श लिन अस्पताल पुगे । ला’शको अवस्था देखेर हंगामा शुरु हुन्छ । ला’शको का’न, आँ_खा, ना’क, औ’ला नै मुखाले खाएको देखिन्थ्यो । अस्पताल प्रशासनले ला’शलाई सही तरीकामा नराखेका कारण यस्तो भएको स्वीकार गरेको छ ।
प’रिवारले आ’रोप लगायो की अस्पलले करीब एक लाख रुपैयाँ लिएपछि लाश परिवारलाई बुझाएको छ । यस्तो देखेपछि परिवारले ला’श लिन अस्वीकार गरेका छन् । त्यसपछि यो विषय प्रहरीकोमा पुगेको छ ।इन्दौरका कलेक्टर मनीष सिंहले मजिस्ट्रियल जाँचको आदेश दिएका छन् । साथै स्वास्थ्य विभागले अस्पताललाई सर्तक रहन आदेश जारी गरेको छ ।
अस्पतालका सञ्चालक डाक्टर प्रमोद नीमाले मृ’तकका परिवारसँग मा’फी मागेका छन् । अस्पतालले उपचार वापत लिएको सबै रकम फिर्ता गरेको छ ।तपाईलाई बताउ की इन्दौरको एमवई अस्पतालमा यही महीना यस्ता लापरवाही दुई पटक भन्दा बढी भइसकेको छ । अस्पतालको गम्भीर कमजोरीका कारण अरुपनि केही लाशको बे’हालत भएको थियो । समाचार स्रोत
जाजरकोटमा जीप दु’घर्टना हुँदा वडाध्यक्षसहित ६ जनाको मृ’त्यु
WHO को चेतावनी:कोरोना एक सातामा ठयाकै आठ गुणा फैलन सक्ने ।
मैले पारसलाई विवाहको प्रस्ताव गर्दा उनले यो हुन सक्दैन भने, त्यसैले म दे’ह त्या’ग गर्ने कोशिष पनि गरे : ५ दिनसम्म कोठामा थुनिएर बसें सोनिका (भिडियो हेर्नुस्)
सारै दुखद खबर डढेलोको प्रभाव ड’ रलाग्दो तथ्यांक ३९ जिल्लामा, अहिलेसम्म ८६ जनाको मृत्यु,
April 5, 2021 April 5, 2021 santosh